पहिचानको विषयमा अनेक भ्रम फैलाइएको छ – Janaubhar
पहिचानको विषयमा अनेक भ्रम फैलाइएको छ
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १३, २०७१ | 224 Views ||
– रेखा शर्मा
पोलिटव्यूरो सदस्य, एकीकृत नेकपा (माओवादी)
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का पोलिटव्यूरो सदस्य रेखा शर्मा बहुमतबाट बनेको संविधानले जनताको मन जित्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउने शर्मा अहिलेको तीस दलीय आन्दोलन त्यसकै व्यवहारिक रुप भएको बताउनुहुन्छ । संविधान निर्माणका लागि आन्दोलन, दलहरु बीचको विवादलगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर शर्मासँग गरिएको कुराकानी –सम्पादक
फागुन १६ गतेसम्म सहमतिको वातावारण बन्न सकेन भने निर्णायक संघर्ष गर्छौं भन्नुभएको छ । कस्तो हुन्छ त्यो संघर्ष ?
पहिलो चरणको आन्दोलन फागुन १६ गते सकिदैछ । हामीले फागुन १६ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा बृहत सभा तथा प्रदर्शन गरेर यो चरणको कार्यक्रम समापन गर्दैछौं । अग्रगामी संविधान जारी नहुँदासम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ । जनताको मुक्तिका लागि हिडेकाहरु कहिले पनि थाक्दैनन् । अबको आन्दोलन निर्णायक हुन्छ । सत्तारुढ दलहरुको व्यवहारमा आन्दोलनको स्वरुप निर्धारण हुन्छ । हामीले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमको समीक्षा गरेर दोस्रो चरणको कार्यक्रम तय गर्छौं ।
हामी चाहन्छौं कि सत्तापक्षीय दलहरु समयमै सहमतिको संविधानको पक्षमाआऊन् । देशलाई मुठभेडतर्फ लैजाने कि शान्ति तथा अग्रगमनको पक्षमा लैजाने भन्ने कुरा सत्तापक्षीय दलहरुले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा तत्काल सहमति हुने देखिदैन । सत्तारुढ दलहरु पेलेरै संविधान बनाउने पक्षमा देखिए त हैन ?
राजनीति सम्भावनाको खेल हो । सहमति हुँदैन भन्ने छैन । सहमति पनि हुन सक्छ । सहमति नगर्ने हो भने पनि उहाँहरुलाई हामीले संविधान निर्माणमा अबरोध गरेका छैनौं । जनताको पक्षमा विगतका सहमतिको आधारमा उहाँहरुले आफै पनि संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ ।
१० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका मधेश, जनजाति तथा विभिन्नखाले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेर संविधान निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हामीले आफूले भनेको मात्रै हुनुपर्छ भनेका छैनौं । संविधानसभा भनेको संसद् होइन । संविधानसभामा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन । बहुमतबाट बनेको संविधानले आम जनताको मन जित्न सक्दैन ।
सहमति शब्द सबैको प्रिय हो तर, सहमति हुनै सकेन भने त जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले संविधान बनाउन किन नपाउने ?
हामीले संविधानसभालाई कमजोर बनाउन खोजेका होइनौं । जनमत एउटा कुरा हो । जनमत भनेको विभिन्न क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विधि मात्र हो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत गर्दै र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु समेटेर संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । हामीले कुनै नयाँ विषय निकालेर त्यसमा सहमति गरौं भनेका छैनौं । विगतका सहमति कार्यान्वयन गरौं भन्नु कुनै गलत कुरा होइन ।
हामीले संविधान निर्माणमार्फत् दीर्घकालिन शान्ति स्थापना गर्न खोजेका छौं । तर, सत्तारुढ दलहरु बहुमतको दम्भ देखाएर पुनः २०४७ कै संविधान जारी गर्न खोज्दैछन् । यसले देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने छन् । हजारौं जनसमुदायको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ । अहिले हामी यही कुरा जनतासमक्ष लगिरहेका छौं । आम जनतालाई संविधानसभाभित्र भएका कुराहरु बुझाउन हामीहरु जनतासमक्ष आएका छौं । संविधान निर्माण समयमै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । संविधान बनाउने नाममा पुरानै यथास्थितिको संविधान हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
तपाईहरुले गरेका आन्दोलनहरुमा जनसहभागिता न्यून देखिन्छ नि त ?
तपाईले भन्नुभएको कुरा एक हदसम्म ठिक हो । अहिले हामीले निर्णायक आन्दोलन भनेका छैनौं । अहिले हामीले गरेको भनेको प्रचारात्मक आन्दोलन हो । अर्को कुरा कुनै पनि आन्दोलनमा एकै पटक धेरै जनसहभागिता हुँदैन । क्रमशः जनताको सहभागिता बढ्दै जान्छ । हामीले दाङको हकमा पनि क्रमशः आन्दोलनमा सहभागीहरुको संख्या बढिरहेको पाएका छौं । मुलुकका विभिन्न स्थानमा ठूला–ठूला सभाहरु पनि भएका छन् । आन्दोलन सशक्त बन्दै गएपछि अझ जनसहभागिता बढ्नेछ । आन्दोलन रहर गर्ने विषय होइन । नेपाली जनता आफ्नो मुक्तिका निम्ति निरन्तर संघर्ष गरिरहेको हाम्रा सामु उदाहरण छ ।
दलहरुबीच सबैभन्दा बढी विवादित भनेको संघीयताको विषयमा तपाईहरुको बटमलाइन के हो ?
हामीले छुट्टै बटमलाइन बनाउनेभन्दा पनि सहमतिमा गरिने विषय हुन् यी मुद्दाहरु । पहिचानका विभिन्न आधारहरु छन् । ती आधारको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विगतमा राज्य पुनःसंरचना आयोगका प्रस्तावअनुसार संघीय राज्य बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । हामीले यति नै संघ हुनुपर्छ भनेर कुनै हठ गरेका छैनौं । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति क्षेत्र र भूगोललाई समेट्ने गरी संघीय राज्य निर्माण गरिनुपर्छ । विगतमा भएका सहमति र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु समेटेर संघीय इकाईहरु निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सत्तारुढ दलहरुले एमाओवादी र मधेशीहरुले जातीय राज्य मागेर देशमा विखण्डन ल्याउन खोजे भनिरहेका छन् ? तपाईहरु किन जातको पछि लागेको ?
हामीलाई जाति राज्य भन्नेहरुले पहिचानलाई बुझेका छैनन् । हामीले जातको कुरा गरेका छैनौं । हामीले पहिचानलाई राष्ट्रियतासँग जोडेका छौं । त्यहाँको भाषा संस्कृति, परम्परालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्दा जातीय राज्य माग्यो भनिन्छ । अहिलेसम्म एउटै जातिको पनि एटा वर्गले मात्र नेपालको राज्यसत्तामा पहुँच पु¥याएको छ । राज्यसत्तामा सबैको पहुँच बढाउनुपर्छ भन्नु जातीय राज्य मागेको होइन । अहिले केहीले नबुझेर जातीय राज्य माग्न थाले भनिरहेका छन् भने केहीले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । बुझाईमा समस्या देखिएको हो । अहिले पहिचानको विषयमा जनता समक्ष भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । अब जनताले क्रमशः यी कुराहरु बुझ्दै जानेछन् ।
तपाईका पार्टीका केही नेताहरु अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा लाग्नुभएको छ । उहाँहरुले पनि पहिचानको विषय बुझ्न नसक्नुभएको हो ?
कुनै नेताले त्यस्तो गर्नुभएको छ भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो । पार्टीको आधिकारिक लाइन भनेको पहिचानसहितको संघीयता हो । कसैले आफ्नो धारणा राखेको हुनुहोला त्यसलाई एमाओवादीको आधिकारिक धारणा मान्नुहुँदैन । हामीले सम्पूर्ण वर्ग, जात, लिंग, क्षेत्र र समुदायलाई अधिकार दिने कुरा गरेका छौं । यो विषयमा कुनै पनि नेता असहमत हुनुहुँदैन । पार्टीभित्र आएका यी कुराहरुलाई हामीले छिट्टै समाधान गर्नेछौं ।
तपाई लामो समयदेखि माओवादी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीहरु जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने महान उद्देश्यका साथ क्रान्तिका लागेका थियौं । त्यो लक्ष्य अझै पूरा भएको छैन । समयक्रमसँगै क्रान्तिको स्वरुप परिवर्तन भएको छ । मैले यी सबै कुरालाई दुई दृष्टिकोणबाट बुझेको छ ।
पहिलो कुरा त हाम्रो यो महान यत्रा पूरा भएको छैन । कसैका व्यक्तिगत आकांक्षाहरु पूरा भएका होलान् त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । हामीले साढे दुई सय वर्षदेखि रहेको एकात्मक राज्यसत्ताको प्रतिक राजतन्त्रको अन्त्य गरेका छौं । संघीयता, समावेशीलगायतका वर्गीय, लिंगीय कुराहरु अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । केही उपलब्धि अवश्य प्राप्त भएका छन् । ती उपलब्धिहरु संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
तपाईहरु दुनियाँ बदल्ने अभियानमा लागेको मान्छे । आजभोलि तपाईहरुले दुनियाँ होइन, दुनियाँले पो तपाईहरुलाई बदल्यो है ?
समयक्रमसँगै हाम्रा केही कमीकमजोरी छन् । वाख्राको बथानमा बाघको डमरुलाई राख्दा शुरुमा उसले घाँस खान खोज्छ तर, समय क्रमशः बाघ बाघ नै हो । उसले सिकार नै खान्छ । त्यस्तै माओवादी पनि एउटा बाघ हो । अहिले यो भित्र पनि ठूप्रै कमी कमजोरी भएका छन् । जनताको अधिकार स्थापित भएन भने फेरी माओवादीहरु जुरमुराउँछन् ।
हामीहरु जनताको मुक्तिका लागि निरन्तर लडिरहन्छौं । यसमा दुई मत छैन । क्रान्ति सिधा रेखामा हुँदैन सधैं वक्र रेखामा जान्छ । त्यसले अहिले केही शिथिल भएको जस्तो मात्र देखिएको हो । हामी पुनः जाग्यौं भने मुलुक बदल्ने छौं ।
Prevसपनामा भैरव अर्याल
Nextसरकारी संरचना नहट्दा सडक विस्तारमा समस्या भएको छ